Weydii su'aasha iyo hel jawaabta: haa ama maya
Si aad u weydiiso
Intee jeer ayaad sugeysaa jawaabta haa ama maya? Imisa jeer ayaad su'aalo weydiisaa? Ku dhowaad qof kastaa wuxuu weydiiyaa dhowr su'aalood maalintii wuxuuna doonayaa inuu jawaabo u helo. Inta badan, dadku waxay ku qasban yihiin inay doortaan doorashooyin. Haa ama Maya, kuwani waa jawaabaha ugu muhiimsan ee su'aalaha badankooda. Sida loo fahmo jawaabta: haa ama maya, waxay noqon doontaa mid sax ah? Haddii aad shaki qabto oo aadan dooran karin, markaa waa wakhti aad ku soo booqato boggayaga. Oo ogow jawaabaha aad dooranayso: haa ama maya. Bogga internetka ee da-no.ru?lang=so waxaad weydiin kartaa wixii su'aalo ah ee laga jawaabi karo haa, maya. Sida loo isticmaalo bogga?
Kaliya qor su'aasha oo guji batoonka "Weydiiso". Dhowr daqiiqo ka dib, jawaabtu waxay noqon doontaa haa ama maya. Dabcan, jawaabaha waxaa loo siiyaa si aan kala sooc lahayn. Oo si buuxda uma aamini kartid habkan. Si kastaba ha ahaatee! Adeegga Jawaabta HAA MAYA waxay ka caawisaa sidii looga hortagi lahaa xishoodka iyo go'aanka saxda ah. Haddii aad heshay jawaabta MAYA, laakiin aad rabtay inaad hesho jawaabta HAA, markaa tani waxay ku siinaysaa kalsooni. Haddii aad dooneysid inaad hesho jawaabta MAYA, laakiin waxaad heshay HAA, markaa su'aashaada ayaa mar kale ku qasbi doonta inaad ka fikirto wax walba oo aad ku qaadato xal kasta oo adiga kugu haboon.
Si kastaba ha noqotee, adeega HAA / MAYA waa wax la yaab leh oo caawinaaya go'aan qaadashada. Inkasta oo jawaabaha la siiyay nidaam gebi ahaanba kala duwan. Oo badanaaba way khaldan yihiin. Laakiin keliya waxaad dooran kartaa. Goobta "HAA ama MAY" waxay kaa caawineysaa in aad fahanto ikhtiyaarka ay tahay inaad sameyso: haa ama maya.